गर्भवती महिलाले खानु हुदैन माछा ? « OsNepal News
गर्भवती महिलाले खानु हुदैन माछा ?
माछाले मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । एक अध्ययनका अनुसार जो मानिस हप्तामा २ देखि ३ पटक सम्म माछा सेवन गर्छन् उनीहरुलाई हृदयघात तथा स्ट्रोकको सम्भावना कम रहन्छ ।
माछामा ओमेगा ३ फैटी एसिडको पाइने भयकोले डिपे्रशन कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले डिप्रेशन हुनेले माछाको सेवन गर्नु फाइदाजनक मानिन्छ ।
माछाको सेवनबाट दम कम हुने गरेको एक अनुसन्धानबाट प्रस्ट हुन्छ । अनुसन्धानको अनुसार माछाको सेवन धेरै गर्ने मानिसमा दमको समस्या कम पाइने गरेको छ ।
आँखाको दृष्टि :
माछाको सेवन गर्ने मानिसहरुमा दृष्टि कमजोर हुने समस्या घटेर जान्छ ।
माछाको सेवनले अनिद्रा हटाएर मानिसमा निद्रा जगाउँछ ।
गर्ववती महिलाहरुको लागी माछा ठिक हुदैन किन कि यसमा धेरै भन्दा धेरै पारो धातु पाइने गर्छ जुन उनीहरुको लागि घातक हुन्छ। यसको असर शिशुमा पर्न गइ बच्चामा विविध खोटहरु देखिनुको साथै सुस्त मनोस्थितिको हुने सम्भावना रहन्छ । माछामा काँडा हुने हुदा ध्यान दिएर नखाएमा ज्यान समेत जान्छ । यो माछा बनाउने वा पकाउनेमा पनि भर पर्छ, माछा घाटिमा अड्किएको खण्डमा केरा खानु पर्छ ।
स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले मौरीपालक किसानलाई अनुदानमा मौरी गोलासहितको आधुनिक घार वितरण गरेको छ । नगरपालिकाको
धान धितो कार्यक्रम लागू , धान धितो राखेर यसरी लिन सकिन्छ कृषि ऋण
बुटवल, खेतीयोग्य जमीन मासिने र नासिने क्रमले कृषिकर्मसमेत प्रभावित हुँदै गइरहेका बेलामा कृषिमा आकर्षण बढाउन
काठमाडौँ-शेयर बजार उतारचढावपूर्ण रहेका कारण कुनै समय लगानीकर्ताका लागि आर्कषक मानिएका वाणिज्य बैंकको शेयरसमेत दोस्रो
विराटनगर – मोरङ व्यापार सङ्घ विराटनगरले विराट ट्रेड एक्स्पो–२०१८ को लगभग तयारी पूरा भएको जनाएको
मिस वर्ल्ड ताजको नजिक श्रृङ्खला, पूर्व मिस नेपाल प्रिति सिटौला भन्छिन ‘यी कारणले गर्दा जित्ने सम्भाबना धेरै छ’ (भिडियो सहित)
बाबुसँंग पैसा मागेर नपाएपछि बेपत्ता भएकी मेनुका १३ दिनपछि मृत फेला
विश्व सुन्दरीको जितको नजिक छिन् नेपाली चेली श्रृङ्खला, श्रृङ्खलाले दिएको प्रस्तुती यसरी लाइभ हेर्न सकिन्छ
The Pairs Free Skating at the ISU Golden Spin of Zagreb 2018 in Zagreb
Conversation with daughter of Baburam Bhattrai Manusi Yami Bhattarai